काठमाडौं, २५ कात्तिक । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थहरु अचेल बारम्बार दोहोर्‍याई रहन्छन्– प्रचण्ड कि त ‘ओलीको लाइन’ मा हिंड्नु पर्‍यो, कि त उनलाई ‘परेड खेलाइन्छ’ र ‘अर्को सीपी मैनाली’ बनाइन्छ ।
२०३८ सालमा ‘पार्टी स्वतन्त्रता’ कि ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्ने विवाद चर्किएपछि मैनालीलाई महासचिवबाट हटाइएको थियो । मैनालीको कारबाहीपछि नेकपा (माले) का महासचिव झलनाथ खनाल बनेका थिए । २०४५ सालमा सिराहाको एक गाउँमा भूमिगतरुपमा भएको मालेको चौथो महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिव नबनाउन्जेलसम्म खनाल नै त्यो पार्टीको महासचिव थिए ।
२०४९ सालको एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादसँग मैनालीले फरक मत राखेका थिए । उनको दस्तावेजको नाम ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’ थियो । भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद भारी बहुमतले पारित भएपछि मैनाली पार्टीभित्र लामो समय अल्पमत नेताका रुपमा रहे ।
२०५१ सालको मनमोहन आधिकारी नेतृत्वको सरकारमा आपूर्तीमन्त्री रहेका मैनालीलाई मन्त्रीपदको दुरुपयोग गरी पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोपमा सरकारबाट हटाइएको थियो ।
२०५४ को छैठौं महाधिवेशनमा मैनालीले वामदेव गौतम पक्षलाई साथ दिएका थिए । नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा गौतम पक्ष निर्वाचन बहिष्कार गरेर हिंडेपछि १४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो । फलतः पार्टी विभाजन भई माले, एमाले भएको थियो ।
पार्टी विभाजनपछि मैनाली मालेमा वामदेव गौतमपछिको दोस्रो शक्तिशाली नेता मानिन्थे । तर २०५६ को आमनिर्वाचनमा मालेले एक सीट पनि ल्याएन । निराश भएका वामदेव गौतम एमालेमै फर्किए । सीपी मैनालीले माले पार्टी भिन्नै चलाई रहे ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा मैनालीको पार्टीको समानुपातिक तर्फको उपस्थिति थियो । अहिले भने उनको पार्टीको कतै प्रतिनिधित्व छैन, एउटा सानो समूहका रुपमा खुम्चिएको छ ।
प्रचण्डलाई परेड खेलाउने भनेको के हो ?
ओली पक्षले अर्को सीपी मैनाली बनाउनु अघि प्रचण्डलाई परेड खेलाउने भन्ने गरेको छ । परेडको अर्थ निर्णायक ढंगले कमजोर नहुन्जेलसम्म कमजोर पार्दै लाने लामो रणनीति हो । २०३९ देखि २०५४ सम्म मैनालीलाई निरन्तर कमजोर पारिएको थियो ।
मूल नेतृत्व नदिने, दोस्रो, तेस्रो तहको पद दिने तर जिम्मेवारी नदिने, बाहिरबाट हेर्दा ठूलै पद दिएको भ्रम सृजना गर्दिने, आन्तरिक रुपमा संगठनको शक्ति अभ्यास गर्न नसक्ने बनाउने र विस्तारै फरक धारका कार्यकर्ताको मूलप्रवाहीकरण गरी अर्थहीन बनाएर पाखा लगाउने रणनीतिलाई ‘परेड’ खेलाउने भनिन्छ ।
माले नेता सिपी मैनाली
के प्रचण्डलाई अर्को सीपी मैनाली बनाउन सम्भव छ ?
माले–एमालेधारको राजनीतिक इतिहास हेर्दा त्यो सम्भव छ । यो धारमा फरकमतको कार्यकर्ता पंक्तिलाई मूल फरकमत नेताको सम्बन्धबाट निरन्तर छाँटिन्छ । कतिपयलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याइन्छ, कतिपयलाई राजनीतिक भबिष्य समाप्त हुने भय सृजना गरिन्छ । कतिपयलाई आफ्नो धारमा आए हुने फाइदाबारे बताइन्छ । अन्ततः मूल नेतालाई एक्लो पारिन्छ र जे गरे पनि पार्टीलाई खासै हानी नहुने स्थितिमा पुर्याइन्छ ।
पूर्वमाओवादी कित्तामाथि ओली पक्षले यस्तो खेल लेख्न थालिसकेको बुझ्न गाह्रो छैन । रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्, प्रभु शाहजस्ता पूर्वमाओवादी हस्तीहरु ओली निकट हुँदै गएको र निर्णायक क्षणमा प्रचण्डलाई साथ नदिने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । यो कुरा सत्य सावित भएमा प्रचण्ड निक्कै कमजोर हुनेछन् । ओली पक्षको अबको रणनीति वर्षमान पुनलाई पनि आफूतिर मिलाउने, नमाने मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गर्ने हुन सक्दछ ।
ओली पक्षको अर्को रणनीति अब नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कमजोर पार्ने र उनको पूर्व समूहको साथ पाएर पनि प्रचण्डका लागि कुनै भरथेक नहुने स्थिति सृजना गर्नु हुनेछ ।
माधव झलनाथको साथ कतिन्जेल ?
तत्काललाई केही पूर्वमाओवादी ओली पक्षतिर मिलेको भए पनि प्रचण्डसँग अहिले पूर्वएमाले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम भएको कारण प्रचण्ड शक्तिशाली नै छन् कि जस्तो प्रतित हुन्छ । तर यो ध्रुविकरण तीव्र हुँदै गएका नेपाल, खनाल र गौतम प्रचण्डको साथमा हुने छैनन् ।
मैनालीलाई एक्ल्याउने प्रक्रियामा पनि ठीक त्यस्तै भएको थियो । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सहाना प्रधान यहाँसम्म कि पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारको समेत मैनालीलाई सहानुभूति हुन्थ्यो । तर जब निर्णायक क्षण आयो मैनालीलाई कसैले साथ दिएन, उनी एक्लै भए ।
अहिले प्रचण्ड पक्षतिर जस्तो देखिएका पूर्वएमालेहरु निर्णायक क्षण आएमा प्रचण्डको पक्षमा हुने छैनन् ।
पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डको मनोविज्ञानलाई आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र ओलीको कमजोर स्वास्थ्यले प्रेरित गरेको थियो । आगामी चुनाव आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा हुने, त्यतिन्जेलसम्म ओलीको स्वास्थ्य पनि कमजोर हुने हुँदा थोरै धैर्यता गरे एकीकृत पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउने सम्भावना देखेका थिए ।
तर अहिले स्थिति ठीक उल्टो भएको छ । प्रचण्डले आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको दावी छोडिदिएका छन् । आगामी चुनाव अब प्रम ओलीकै नेतृत्वमा हुनेछ । दोस्रोपटकको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि ओलीको महत्वाकांक्षा अझै चुलिएको छ । उनी सजिलै प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् ।
ओली कुनै हालतमा जबजवादीहरुको पकड र विरासत पार्टीमा गुमाउन चाहँदैनन् । प्रचण्डलाई जबजको घोषित प्रवक्ता हुन गाह्रो छ । यो अन्तर्विरोधले प्रचण्डलाई नेकपाबाट झनै छेऊतिर धकेल्ने छ । ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल लगायतले जबजको मोर्चा पुनः सक्रिय बनाउनुको अर्थ त्यही हो । यस काममा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पूर्णतः साथ सहयोग हुनेछ ।
के गर्लान् प्रचण्ड ?
नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन विश्लेषण गर्दा प्रचण्ड निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । कम्युनिष्ट इतिहास हेर्ने हो भने सोभियत संघमा त्रोतस्की वा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा लि साओ चीको जस्तो अवस्थमा पुगेका छन् ।
गत वैशाखमा ओलीमाथि निर्णायक हमाला गर्ने अवसर थियो । एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड, दल विभाजन अध्यादेश, समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि गरिएका अवााञ्छित क्रियाकलाप र कोरोना प्रतिरोधको गलत रणनीतिको कारण ओली बदनाम भएका थिए ।
त्यही अवसरमा संसदीय दलमा अल्पमतमा पारेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु प्रचण्डका लागि सही रणनीति हुन सक्दथ्यो । तर अब त्यो अवसर गुमेको छ । ओली पक्षले नयाँ ढंगले शक्तिआर्जन गरिसकेको बुझिन्छ । यतिखेर ओलीविरुद्ध कुनै कदम चाल्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा होस् वा संसदीय दलमा ओली पक्षकै बहुमत हुनेछ ।
ओरालो लागेको हरिणको चाल
प्रचण्डलाई माओवादी आन्दोलनमा निक्कै चतुर र आवश्यकताअनुसारको खेल खेल्न सक्ने नेता मानिन्थ्यो । त्यहाँ डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, विप्लवजस्ता हस्तीहरु थिए । माओवादीभित्रको अन्तर्विरोधमा उनले सबैलाई आफ्नो वरिपरि घुमाएका थिए । एमालेसँगको एकतापछि पनि आफ्नो त्यो गुण र क्षमताले कमाल गर्न सक्ने सायद उनको बुझाई थियो ।
तर, प्रचण्डको त्यो चतुरताले नेकपामा खासै काम गरिरहेको छैन । जीवनभरी अरुलाई रिंगाउँदै आएका उनी अहिले आफै रिंग्नु पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
नेकपाको अन्तर्विरोध आउँदा दिनमा झनै जटिल हुने पक्का छ तर शक्तिसंघर्षको बाघचालमा कसले कसलाई थुन्ने हो, कसले कसलाई खाने हो, त्यो भने पर्खिएरै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।